Mpiofana ho komando : Miisa 215 ireo avy nahavita fiofanana -
AccueilSongandinaMpiofana ho komando : Miisa 215 ireo avy nahavita fiofanana
Mpiofana ho komando : Miisa 215 ireo avy nahavita fiofanana
Tsy resa –be ny hoe komando fa tena misy marina ary manofana izany dia ny CNEC “ Ivon-toerana nationaly fiofanana ho komando” , ireo miaramila ( tafika sy zandary) no miofana ao amin’ izany toerana izany. ny ivontoeram-panofanana dia manana ny teny filamatra hoe “ Tsy misy mafy tsy laitran’ ny zoto” , ary ny kapiteny Jaosafara Delphin Christian no kaomandin’ ny ivon-toeram-piofanana CNEC. Ny fiofanana izay hatrehan’ ireo mpiofana moa dia mifantoka manokana amin’ ny fahaizana hiatrika ireo fahavalo any amin’ ny faritra mena, izany hoe na io dahalo na io toerana hanjakan’ ny tsy fandriam-pahalemana ary raha sanatria ihany koa misy ny fahavalom-pirenena avy any ivelany. Andiany roa samy hafa no nivoaka teo anivon’ny ivon-toeram-piofana miaramila mpanao vy very ny ainy ao amin’ny CNEC Ambatoloana, ny zoma 06 aprily 2018 dia ny andiany CNEC AMBATOLOANA APINGA miisa 180 izay notolarana brevet tsirairay avy rehefa nahatontosa ny fanovozan-traikefa tao anatin’ny 21 andro sy ny force spéciale andiany fahatelo KOMANDO APINGA miisa 35 izay notolorana brevet sy marim-pahaizana na certificat tsirairay avy rehefa nahavita ny fiofanana tao anaty 45 andro.
Nisantatra ny lanonana ny fampisehon’ ireo mpiofana nahavita fiofanana ny fahaiza manaon’izy ireo eo amin’ izay hoe maha komando azy ireo izay, teo ihany koa ny fampisehoana fahaiza-manao teknika sy taktika an’ireo mpiofana mandeha sambo kely hanafika fahavalo. Ny lanona izay nifanindran-dalana indrindra tamin’ ny famaranana ny fankalazana ny faha 30 taonan’ny CNEC izay notarihin’ny Jeneraly RASOLOFONIRIANA Béni Xavier, Minisitrin’ny Fiarovam-pirenena, notronin’Andriamatoa Jeneraly RAKOTONIRINA Léon Jean Richard Sekretera maharitra misahana ny fiarovana sy ny filaminam-pirenena sy Andriamatoa RAKOTOARISOA Eric Filohan’ny HCC, niaraka tamin’ireo tomponandraikitra ambony eo anivon’ny Foloalindahy sy ireo manampahefana avy eo an-toerana.
Tao aorian’ny lanonana sy fampisehoana nataon’ ireo komando dia nisy sy fitokanana sy ny fitsidihana ireo fotodrafitrasa maro nasiam-panamboarana, nahitana ny toerana fandraisana ireo mpiofana, ny toerana fidioavana sy fanadiovana, ny ankany ary ny efitrano fianarana. Ankoatra izany ihany koa dia nisy ny fanomezana fampitaovana toy ny maso lavitra ho entina miatrika fanazaran-tena amin’ny alina (combat de nuit) izay natolotrin’ny Etamazaoro Jeneralin’ny Tafika Malagasy ho an’ny ivon-toeram-piofanana. Noho izany dia feno tanteraka ny fepetra ho an ‘ ny CNEC amin’ izay fampiofanana ho komando izay, ary eo ihany koa ny fitaovana maro izay hanan’ ny ivon-toerana ka rehefa misy ny fampiarana dia tsy ho vaovao amin’ ireo komando intsony ny fitaovana eo ampelatanany. Amin’ ny maha firenena manana ny fiandrianany an’i Madagasikara moa dia manana ny mpiaro izay fiandrianana izay ihany koa ny firenena, izay tsy iza i fa ireo eo anivon’ ny tafika izay miofana amin’ ny fiarovana izay mety ho fahavalo misy.
Manohy hatrany ny fifampiarahabana tratry ny taona ny antoko HVM. Taorian’ny tany Mahajanga, ny vahoakan’i Marovoay indray no nandray izany lanonan’ny asaramanitra izany ny sabotsy lasa teo, ary nisolo tena ny filoha mpanorina ny antoko ...Tohiny